Abaaro & biyo la'aan baahsan oo saameeyay ganacsiga Buuhoodle ee gobolka Cayn – SBC
Abaaro & biyo la'aan baahsan oo saameeyay ganacsiga Buuhoodle ee gobolka Cayn
Posted by editor on April 26, 2011 Comments
Buuhoodle- Iyadoo guud ahaan badi gobolada dalka Soomaaliya ay ka jiraan abaaro xoogan oo saameyn balaaran yeeshay ayaa gobolada ay abaartu sida aad ah u saameysay waxaa ka mid ah Gobolka Ceyn Puntland .
Magaalada Buuhoodle xarunta Gobolka ceyn ayaa siweyn looga dareemay abaarta baahsan ee Gobolka ka jirta, waxaana la soo sheegayaa in albaabadii loo laabay goobo badan oo lagu shaahi jiray iyo kuwo kale oo loogaga ganacsanjiray waxyaabaha la xiriira biyaha iyo manaafacaadka gobolka, taas oo ay sabab u tahay abaarta ka taagan Gobolka oo sababtay biyo la’aan baahsan .
Sida uu ku soo waramayo wariyaha SBC International ee gobolkaas abaarahan taagan ayaa waxay saameen buuxda ku yeesheen dadka ku dhaqan howdka gobolkaas, kuwaas oo ay ka le’deen xoolihii ay dhaqanayeen inkastoo ay u badan yihiin reer guuraa .
Waxaa sidoo kale wararku intaasi ku darayaan in biyo la’aan darteed ay u geeriyoodeen dad iyagu ku dhaqanaa hodka fog ee Gobolka ceyn, waxaana sida la xaqiijiyay ay gaarayaan dadka biyo la’aanta ku geeriyooday 2 qof .
Dhinaca kale waxaa la soo warinayaa in roobab aan sidaasi u badneyn ay ka de’een deegaano dhaca waqooyiga magaalada Buuhoodle xarunta Gobolka ceyn kuwaas oo ay ka jireen abaaro baahsan islamarkaana ay si aad ah ugu farxeen dadka halkaasi ku dhaqan .
SBC International Buuhoodle.